किन फुट्छ नाथ्री ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
किन फुट्छ नाथ्री ?
डा. लालकिशोर यादव
गर्मी मौसममा नाथ्री फुट्ने समस्या धेरै देखिन्छ । कहिलेकाहीँ त नाथ्री फुटेर एक्कासी ह्वालह्वालती रगत आइदिँदा मानिसहरू के गर्ने भनेर अलमलमा पनि पर्ने गर्छन् । गर्मी मौसममा धेरैको नाकबाट रगत बहने गर्छ । कहिलेकाहीँ अन्य समयमा पनि एक्कासी रगत आएको हुनसक्छ । यसरी नाकबाट रगत आउनुका विभिन्न कारण हुन सक्छन् ।
नाक हाम्रो शरीरको निकै संवेदनशील अंग हो । सानो चोटपटक वा अन्य केही समस्या भएमा यसले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । गर्मीयामसँगै विभिन्न संक्रमणका कारण नाक सुक्खा हुँदा नाथ्री फुट्ने समस्या बढी नै हुन्छ । नाकबाट रगत बग्ने विभिन्न कारण भए पनि संक्रमण नै मुख्य कारण भनेका छन् चिकित्सकले । गर्मी समयमा तातोपनाका कारण नाकमा रहेका रक्तनलीहरू फुल्छन् । कतिपय साना नलीहरू आफैँ फुट्न जान्छन् र त्यहाँबाट रगत आउँछ ।
कुनै पनि चिजले नाकमा ठोक्किएर चोटपटक लाग्यो भने पनि नाकबाट रगत आउँछ । रुघाखोकीलगायत अन्य रोगको संक्रमण भई घाउ हुँदा पनि रगत आउन सक्छ । नाकमा ट्युमर (मासु पलाउने) भएमा पनि नाकबाट रगत आउँछ । रगतमा हुनुपर्ने प्लेटलेटको कमी हुँदा, रगत जम्न नदिने औषधि सेवन गरिरहेको अवस्थामा पनि नाकबाट रगत बहन सक्छ ।
त्यस्तै, रक्तजन्य रोगहरू हुँदा होमोफेलिया भएको व्यक्ति, कलेजोको रोग भएका व्यक्तिको पनि नाकबाट बारम्बार रगत आउने हुन्छ ।
मिर्गौलामा समस्या भएकाहरूमा पनि नाकबाट रगत जाने समस्या हुन्छ ।
कारण के हो नाथ्री फुट्ने ?
–पाप्राको कारण नाक कोट्याउने बानी ।
–चोटपटक, ठोक्किएर ।
–नाकभित्रको रक्तनली फुटेर ।
–रगत जमाउने तत्वमा कमी आउँदा ।
–जान्ने भएर रगत पातलो बनाउने औषधिको सेवनका कारण ।
–उच्च रक्तचाप, रक्तअल्पता, र हृदयको रोग भएमा ।
–फ्लु, क्यान्सर, हिमोफोलिा, लहरे खोकी, निमोनिया तथा टाइफाइड भएमा ।
पिरो, मसलेदार, चटपटे , अमिलो, खानेकुरा, अचार, दही, रक्सी आदि खाना ।
नाथ्री फुटेमा सामान्यतयाः केही समयमा रगत रोकिने गर्छ । तर, लामो समयसम्म पनि रगत बगिरहेमा नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा चिकित्सकलाई देखाइहाल्नु पर्छ । नत्र नाकको कारणले थप समस्या निम्तिन सक्छ ।
मुखबाट सास फेर्ने, बरफ नाक माथि राख्ने वा बरफका चिसो पानीमा भिजाएर कपडा राख्ने, गर्मीको दिनमा बिहान बेलुका सकेसम्म नुहाउने, गुलियो अंगुरको रस खाने, धनियाँको हरियो पातको वा प्याजको रस रोगीको २ २ थोपा नाकमा हाल्ने ।
गर्मीमा चिल्लो खानेकुराबाट सकभर जोगिने, तारेको र पिरो खानेकुराहरु नखाने, गर्मीमा बढी लसुन, माछा, मासु र अण्डामा जोड नगर्ने, गर्मीको मौसममा चिसो बरफ नखाने, मनलागे तापक्रम मिलाएर खाने, गर्मीमा चिया, कफी, बढी नपिउने, रक्सी, सुर्ती तथा धुम्रपान नगर्नुनै बुद्धिमानी हुन्छ ।
नाकबाट रगत जाँदा यसको प्राथमिक उपचार भनेको बुढीऔँला र अर्को औँलाले बेस्सरी नाकलाई च्याप्ने हो । नाक च्यापेर १० मिनेटसम्म अगाडि पट्टि निहुरिने । सो समयमा मुखबाट सास फेर्ने ।
यदि १० मिनेटसम्म थिच्दा पनि रगत आउन नछोडे तत्काल नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई जाँच गर्ने ।
नाकको अगाडिको भागमा नसा फुटेर रगत आएको समस्या औषधिबाट नै ठीक हुन्छ भने पछाडि पट्टि समस्या भए एक प्रकारको चक्कीले प्रेसर दिएर रगत रोकिन्छ ।
रगत आएका वेला नोजल ड्रप प्रयोग गर्नु उचित हँुदैन । यस्तो ड्रपले तत्काललाई नसा खुम्च्याएर रगत बन्द गरे पनि केही समयमा नै पुनः रगत आउन सक्छ ।
एकपटक नाकबाट रगत आइसकेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिले घाममा निस्कँदा होस पु¥याउनुपर्छ ।
केटाकेटीहरूलाई धेरै गर्मीमा खेल्न दिन हुँदैन । केटाकेटीहरू घाममा धेरै खेल्दा र दौडँदा तापक्रम बढी भएर नाकमा रहेका रक्तनली फुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
रुघाखोकीले नाकमा संक्रमण गराउने हुँदा ख्याल गर्नुपर्छ ।